Global Voices teny Malagasy » Ny Fomba Fiaina Munduruk, Tandindonin-doza Noho Ny Asa Fanorenana Tohodrano Ao Brezila · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 09 Febroary 2015 4:00 GMT 1	 · Mpanoratra Pública - Agência de jornalismo investigativo Nandika (en) i Taisa Sganzerla, avylavitra
Sokajy: Amerika Latina, Brezila, Fampandrosoana, Fanoherana, Mediam-bahoaka, Teratany, Tontolo_iainana
Hiantsoana ny faharanitan-tsaina sy ny fahaiza-miaro tenan'ity biby ity, lokoin'ireo lehilahy ny tenany hitovy amin'ny hoditry ny “jabutis” (sokatra ao Amazon). Sary: Marcio Isensee e Sá, Agência Pública. CC BY-ND.
Lahatsoratra nivoaka voalohany tamn'ny 11 Desambra 2014 tao amin'ny Agência Pública , niaraka tain'ny fanohanan'ny Mongabay , taminà fizaràna roa: “The Battle for the Munduruku Borders”  sy “Decades of Struggle for the Tapajós” , izay samy nosoratan'i Bruno Fonseca. Namboarina hifanaraka aamin'ny eto amin'ny Global Voices ary havoaka anaty fizaràna telo.
Vakio ato amin'ny Global Voiices ny ampahany voalohany [Eng]: “Battle for the Tapajós: Brazil's Construction of Hydroelectric Dams Threatens the Munduruku People “
Na teo aza ny fikorontanana ambony ambany tao am-bohitra mikasika ilay tohodranbo, dia manohy ny fiainany andavanandro ifandraisany akaiky amin'ny tany ireo Munduruku avy ao Sawré Muybu. Ny maraina, mamàfa ny gorodon'ny tranony vita tamin'ny tanimanga sy ny rindriny vita hazo ireo vehivavy, izay natao tamin'ny ravinà “babaçu” kosa ny tafony. Avy hatrany dia mitsimpona mihinana izay voakipily avy any an-trano kosa ny akoho sy ny alika. Azo lazaina ho zara raha misy loto tsy organika. Ireo lehilahy lehibe no mikarakara miaro ny fambolena kely, hatramin'ny fanjonoana sy ny fihazàna. Ny rano dia alaina amin'ny loharano iray mangatsakatsaka (antsoina hoe “igarapé” ao Amazon) izay mamakivaky ny tanàna.
Aorian'ny sekoly, mikarenjy mihazakazaka manerana ny tanàna sy mihinana ireo voankazo eny amin'ny hazo eny ireo ankizy. Ny hany sorisory tsikaritray tao dia ny fameperana ny fotoana ahafahan'izy ireo milomano: “In-telo isanandro ihany aho no avelan'i Neny milomano,” hoy ny zazalahy kely iray izay efa nahazo ny anjara fatranà tara-masoandro migainany isananandro. Minitra vitsy taorian'izay dia efa nitsoraka tao anatin'ilay rano mangitsy izy, mitsiky mameno ny tarehiny.
Saingy zava-tsy ampoizina foana ny sakafo aroso. Rehefa tafaverina avy nanjono na nihaza ireo lehilahy vao fantatray izay sakafo hohanina. Ireo tovovavy no manadio ny sakafo ary mitsinjara ny ampahany ho an'ny fianakaviana tsirairay. Hena samihafa no aroso isanandro nandritry ny fotoana nolanian'ny tarika mpanao fanadihadiana nisy anay tao an-tanàna: armadillo, jabuti (sokatra), diera ary ilay lambo matsiro fantatra amin'ny hoe “caititu” na “porcão”. Betsaka loatra ka tsy voaisanay intsony ireo karazan-trondro.
Sarotra be ny haka sary an-tsaina ny fomba ataon'ireto olona ireo mba hivelomany ao anatinà tontolo iainana zara raha misy trondro sy haza ho alaina.
Maniry daholo ny handray anjara amin'ny fombafombam-pandihizana sy fihiràna ny tanora sy ny ankizy.Amin'izy ‘ireny, ny fiteny Munduruku ihany no ampiasain-dry zareo. Sary: Marcio Isensee e Sá, Agência Pública. CC BY-ND.
Ao anatin'ireo zava-manjavozavo entin'ny fanamboarana ilay tohodrano, ny tahotra hoterena hifindra hiaina any an-tanàn-dehibe no tena goavana. “Tsy hainay ny miaina ny fombanareo,” hoy i Aldira Akai Munduruku manazava. “Niaina mandrakariva taty an'àla izahay, nihaza, nanjono. Any an-tanàn-dehibe, ny vola no hozatry ny fiainana. Rehefa tsy manana azy ianao, tsy afaka hihinana.” Tsaroan'i Aldira, reny mitondra vohoka dimy volana ary niteraka vavikely iray roa taona, ireo taona niaretany hanoanana raha niaina tany an-tanàn-dehibe tao Jacareacanga fony izy mbola zaza.
Any anatin'ireo tantara tantarain'ny zokiolona, angano izay mampifangaro ny olona sy ny biby ho ao anaty vàtana iray, ny “jabuti” no maherifo indrindra mbola hita hatramin'izao. Noho ny faharanitan-tsainy sy ny tetikadiny, resiny mandrakariva ny tanjaka sy fidedahan'ny fahavalony: ny tapir, ny bibliava vaventy “anaconda” ary ny “jaguar”. Mba hiantsoana ireny fahaiza-manaony ireny, lokoin'ireo mpiady aminà sary mitovy amin'ny lamosin-tsokatra “jabuti” ny tenan'izy ireo.
Mbola re hatramin'izao ireo tantara fahiny. Tany amin'ny fisasahan'ny taonjato faha-18 tany, nisy betsaka ny ady nifanaovan'ny Munduruku sy ny Portiogey tao amin'ny faritra ka nahatonga ny iray amin'ireo reniranon'i Tapajós ho lasa fantatra tamin'ny hoe “Troops River” (Rio das Tropas – Reniranon'ny miaramila). Hatreo, fantatra tamin'ny hoe “mphaza lohan'olona” ny Munduruku, satria tapahan-dry zareo ny lohan'ny fahavalony ary, aorian'ny fikarakaràny azy ho faty tsara tahiry, dia atsangany amin'ny lefony eny amin'ny fefy mamaritra ny taniny ireny loha ireny. Efa taonjato iray mahery izao no nialàny io fomba fanao io, saingy mbola ampahatsiahivin'ireo Munduruku ny herin'izy io sy ny tanjany amin'ny fandokoany izay sary izay eny amin'ny sisintany mamaritra ny toerana nofaritan'izy tenany ho azy.
Na izany aza anefa, tsy tian-dry zareo ny hankalazàna azy ho mahery setra. “Tia fandriampahalemana ny Munduruku. Saingy rehefa mikitikitika ny maharary anay ianao, dia tezitra izahay,” hoy i Deusiano Saw Munduruku, mpampianatra ao amin'ny sekoly ao Sawré Muybu. Ny anaran'ny hetsika fanoherana ilay tohodrano dia antsoina hoe “Ipêreg Ayû”, izay midika hoe “ireo vahoaka mahay miaro tena amin'ny herin'ny tenany ihany”. Roseninho, voafidy ho solontenan'ireo Munduruku teny anivon'ireo (tsy indizena), no manazava: “Lazain'ny governemanta fa mampitahotra izahay. Nefa izahay aza no tena ampitahorina.”
Aorian'ny fianarana, milalao mandrapaha-maizin'ny andro ny ankizy ao am-bohitra. Sary: Marcio Issensee e Sá, Agência Pública. CC BY-ND
Ny lesona avy amin'ny Belo Monte
Voatohitry ny fomba fiainan'ny Munduruku sy ny faritra misy azy ireo faneriterena samihafa nandritry ny taona maro. Tany ampiandohan'ny taonjato faha-20, ny irak'ireo misionera mpitondra fivavahana. Tsy nahita fahombiazana ny ezak'ireny hanapaka ny fampitàna ny tenin-drenin'ny Munduruku sy ny fombandrazany. Teo anelanelan'ny 1940 sy 1960, napetraka ny Sampan-draharaha Mpiaro Ny Vahoaka Indizena napetraka tao amin'ny faritra famokarana fingotra tany amin'ireo tanin'ny Munduruku, ho andrana hamadihana azy ireny ho “miaramilan'ny fingotra”. Vao haingana indray, ny fananiham-bohitr'ireo mpikapa hazo sy ireo tsy miankina mitrandraka harena ankibon'ny tany no fototry ny tsy fahazoana miaina am-pilaminana. Ankehitriny, manampy azy ireny ny resaka tohodrano.
Raha kely indrindra dia efa ho roa taona izao no miatrika fifandirana mikasika ny taniny eny amin'ny fitsaràna Ireo indizena sy mponina amoron-drano, izay namaritra ny ala tamin'ny fombany fotsiny. Nanao taratasim-pitoriana miisa valo ny biraon'ny mpampanoa lalàna federaly hitakiana amin'ilay asa fanorenana tohodrano ao amin'ny renirano Tapajós ny hanajàny ireo vahoaka eo an-toerana, tsy misy hafa amin'ilay ady ara-pitsaràna nahafantarana ny tohodrano Belo Monte tao amin'ny fanjakàn'i Pará.
Ny tena fahasamihafàna amin'ity tranga ity dia ny lesona notsoahana tamin'ny an'ny renirano Xingu River. Taorian'ny nanampiany nibodo ny toerana misy ny tohodrano ao Belo Monte tamin'ny May 2013, nanomboka nanaraka ny fomba ftakiana nataon'ireo indizena tamin'ny governemanta ny Munduruku : nanakalozan'izy ireo ny jono sy ny haza ary ny toeram-pamboleny taminà kitapon-tsakafo (haraton'aina), fiara fitateran'entana sy endrika sakafo hafa natolotra ho toy ny tamby. Mampanahy ny vahoaka ao Tapajós raha ny toe-draharahan'ny fiankinana ara-bola ankehitriny any amin'ireo tanàna manakaiky an'i Belo Monte .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2015/02/09/67453/
 “Decades of Struggle for the Tapajós”: http://apublica.org/linha-do-tempo-decadas-de-luta-pelo-tapajos/
 Battle for the Tapajós: Brazil's Construction of Hydroelectric Dams Threatens the Munduruku People: https://globalvoicesonline.org/2015/01/09/battle-for-the-tapajos-brazils-construction-of-hydroelectric-dams-threatens-the-munduruku-people-part-1/
 fiankinana ara-bola ankehitriny any amin'ireo tanàna manakaiky an'i Belo Monte: http://brasil.elpais.com/brasil/2014/12/01/opinion/1417437633_930086.html